Hay'ad sirdoon oo gudbisay dalab ka dhan ah dad ay Soomaali ku jiraan
By WARIYAHA YURUB , GAROWE ONLINE
Shuruucda ayaa dhigeysa in 10-sano lagu xukumo qofkii lagu helo argagixisanimo.
CANBERRA, Australia – Hay'adda mukhaabaraadka Australia ayaa ka codsatay baarlamaanka waddankaas in uu cusbooneysiiyo sharciga argagixiso la dirirka kaasoo dhacaya sanadka dambe ee nagu soo aadan 2021-ka.
Talaabadaan ayaa kusoo hagaageysa xilli lagu waddo in ay dalkaas dib ugu laabtaan sideed muwaadin oo dhalasho ka haysata balse qaarkood ay asal ahaan kasoo jeedaan Soomaaliya kuwaasoo aadey Bariga Dhexe.
Sidda laga soo xigtay warbixinta hay'adda, khatarta kooxaha argagixisada ah ku hayaan ammaanka Australia ayaan isku dhimin si waxtar leh.
Shuruucda argagixiso la dagaalanka Australia ayaa xeerinaya in qofkii lagu helo dambi noocaas ah lagu xukumi karoo tobban sano oo xabsi ah.
Khabiirada oo duray shuruucda waxay sheegeen in uusan dhabaha u xaareyn in dadka aan dambiga gelin ay helaan cadaalad, iyagoo hoosta ka ka xariiqay mid ogolaanaya in ganacsi laga sameeyo dadka colaadaha lagu qabto.
Ian McCartney, taliyaha booliska Australia, ayaa daaha ka rogtay in Soomaaliya, Yemen, Liibiya, Afghanistan iyo Philippines ay kamid yihiin meelaha halista uga imaan karto qarankeeda, iyadoo xoojisay in il gaar ah lagu eego.
Tan iyo 2012-kii, sidda warbixin lagu sheegay 80 kamid ah 230 qof oo ku nool Australia ayaa u dhoofay dalalka ay colaaduhu ka jiraan; 100 kamid ah waa la dilay, halka 40 ay soo laabteen kuwaasoo walaac ku haya dadweynaha.
Soomaali kamida dad banaanbaxay iyagoo wata naxashka meydka
Caalamka 30.07.2019. 08:45
Dibad-baxayaasha oo erayo culus ku dhawaaqayey ayaa ku mudaaharaaday afaafka hore ee baarlamaanka Australia.
Shirkado loo ogolaadey in ay hub u dhoofiyaan Soomaaliya
Soomaliya 11.03.2020. 14:25
Australia oo safiir cusub u soo magacaabatay Soomaaliya
Wararka 03.10.2019. 09:38
Digniin laga soo saarey weeraro ay maleegeyso Daacishta Soomaaliya
Soomaliya 11.09.2019. 10:43
Doorashooyinka Somaliland oo markii lixaad uu dib u dhac ku yimid
Somaliland 08.08.2019. 15:12
Ciidamada Soomaaliya oo Al-Shabaab ka saarey degaan muhiim ah
Soomaliya 06.08.2019. 12:56
Odayaasha soo xulaya Xildhibaanada Jubbaland oo wajahaya "hanjabaad"
Soomaliya 03.08.2019. 17:27
Khayre oo Puntland ugu hambalyeeyay 21 guurada markii la yag-leelay
Soomaliya 01.08.2019. 09:59